Ukufundwa okunconyiwe kuleli hlobo | Izincwadi Zamanje
UCarmen Guillen | | Izinhlobo, Amabhuku, Literatura, eziningana
El ehlobo Ibifakwe ngokusemthethweni kule nhlonhlo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, yize sikhuluma ngesimo sezulu bekuhlale nathi isikhathi eside. Ngobani abaningi nabancane abasizakala ngabo amaholide ehlobo ukuba ne- incwadi Esikhwameni, ebhishi noma echibini, kuyindawo ephumule kakhulu ukunqamula kuyo yonke into futhi uzinikele ngokuphelele ekuphumuleni nasezincwadini.
Uma uvela funda okuningi ehlobo ukuthi kunoma iyiphi inkathi noma uma ungomunye walabo okukhulunywe ngabo ngenhla abangayi olwandle bengenayo incwadi ozohamba nabo, lesi yisihloko sakho. Sizokunikeza uchungechunge lwezifundo ezinconyiwe kuleli hlobo. Ubhalisa?
1 «Ungabheki ngaphansi kombhede» nguJuan José Millás
2 "Uzungu lweziwula" lukaJohn Kennedy Toole
3 "I-Snow White Kumele Ife" nguNele Neuhaus
4 "Owesifazane owakhiwe" nguGioconda Belli
5 Izincwadi zokubhala zika "Don Rigoberto" zikaMario Vargas Llosa
«Ungabheki ngaphansi kombhede» nguJuan José Millás
Kwesinye isikhathi okuthile kwansuku zonke njengokuhlangana nethuba ngesikhathi sokuhamba esitimeleni kungaba yisiqalo sokukhathazeka okwazi ukunikeza injongo entsha empilweni. Yilokho okuzokwenzeka ukwahlulela u-Elena Rincón, omunye wabalingiswa besifazane abahamba phambili owadalwa nguJuan José Millás kuwo wonke umsebenzi wokubhala Ungabheki ngaphansi kombhede inoveli emayelana nokulinganisa nokungalingani kwemibhangqwana kanye nokufunwa kwendawo yonke kobungani nothando. Futhi, njengokujwayelekile kumbhali, ngalelo elinye iqiniso elikhonjiswa nsuku zonke emaphethweni esikholelwa kuwo iziqiniseko ezingenakunyakaziswa, ngokulawulwa okuphelele kwezinto zakhe eziqanjiwe kanye nenhlanganisela yamarejista asukela kumdlalo kuya kumancoko. indida nokuphazamiseka kwezimpande ze-surreal, uMillás ukwazile ukudala indaba ethokozisayo ekhanga umfundi ngokugqama kwesigqi sayo nokungajwayelekile kwezimanga zayo.
Intengo yayo kwi-Editorial Point of Reading ayidluli kuma-euro angama-9 futhi iyincwadi enamakhasi ayi-171, ngakho-ke futhi imfushane futhi iyalawuleka ukuhamba nayo noma yikuphi.
"Uzungu lweziwula" lukaJohn Kennedy Toole
Ukuhlanganiswa kwama-ceciuos Kuyinoveli engasile, ene-asidi futhi ehlakaniphe kakhulu. Kepha hhayi lokho kuphela, futhi kuyahlekisa futhi kubabaze kakhulu ngasikhathi sinye. Ukuhleka kuphunyuka kukodwa ngaphambi kwezimo ezingalingani zalesi sifo esibuhlungu kangaka. Ignatius J. Ngempela Cishe ungomunye wabalingiswa abahamba phambili owake wadalwa futhi abaningi abanganqikazi ukumqhathanisa noDon Quixote. Ngaphezu kwalokho, uyi-anti-star ephelele yenoveli egcwele izinhlamvu ezinhle kakhulu, ebekwe ethekwini ledolobha laseNew Orleans, u-Ignatius onekhono. Akaqondwa kahle, umuntu oneminyaka engamashumi amathathu ubudala ohlala endlini kanina futhi olwela ukuthola umhlaba ongcono ngaphakathi kwegumbi lakhe. Kodwa ngonya uzodonswa ukuzulazula emigwaqweni yaseNew Orleans eyofuna umsebenzi, ephoqeleka ukungena emphakathini, lapho egcina khona ubudlelwane bokwenyanya bobabili, ukuze akwazi ukukhokhela izindleko ezidalwe ngunina engozini yemoto ngenkathi Bengishayela ngidakiwe.
Ngokubona kwami, kuyincwadi okufanele uyifunde okungenani kanye empilweni yakho.
"I-Snow White Kumele Ife" nguNele Neuhaus
Ngosuku olumnyama lukaNovemba, abasebenzi bathola amathambo omuntu endaweni eyayiyinkundla yezindiza yamasosha aseMelika edolobheni eliseduze naseFrankfurt. Ngokushesha ngemuva kwalokho, othile uphusha owesifazane asuke ebhulohweni. Uphenyo lubuyisa oKhomishani uPia Kirchhoff no-Oliver von Bodenstein emuva: eminyakeni eminingi eyedlule, edolobheni elincane lase-Altenhain, amantombazane amabili anyamalala. Inqubo yokwahlulela esuselwe ebufakazini obuthile ibeka lowo osolwa ngokwenza lesi sigameko uTobias ejele. Manje usebuyele esigodini sakubo. Ukunyamalala kwenye intombazane kuzoveza ukuzingelwa kwangempela kwabathakathi.
Kunconywe ikakhulukazi kulabo bafundi bokungabaza.
"Owesifazane owakhiwe" nguGioconda Belli
Indaba le ikhombisa umzabalazo onzima kanye nesibindi sokuthi labo abakwaziyo ukukhombisa labo abaziqhenyayo ngokuba ngamasiko futhi abanamathela ngothando ezinhlosweni zawo, izwe labo kanye nomndeni wabo, bayakwazi ukuvukela ukuhlukunyezwa nokungabi nabulungisa, bebeka nobungozi bakhe impilo. Le ndaba isitshela ngowesifazane ogama lakhe linguLavinia, umqambi wezakhiwo ohlukana nezinkoleloze zomphakathi oyisilonda ahlala kuwo, uzikhulula kubazali bakhe ukuze aphile eyakhe indaba, enokukhathazeka nezinjongo zanamuhla. Ngasikhathi sinye, kuvela u-Itzá, odalulwa indaba yakhe njengoba umdlalo uqhubeka. Ekugcineni laba besifazane ababili bayahlangana, ngokomzimba nangokwengqondo, kanye nemizabalazo yabo edlule neyamanje iguqulwa ibe umzabalazo owodwa wokushisekela, kowesifazane wezwe elingcono.
Kulabo bethu abacabanga ukuthi imigomo ikhona ukuzivikela.
Izincwadi zokubhala zika "Don Rigoberto" zikaMario Vargas Llosa
Izincwadi zokubhala zikaDon Rigoberto iyinoveli evusa inkanuko ebhalwe nguMario Vargas Llosa, owathola iNobel Prize ngezincwadi ngo-2010.
Ingqikithi yendaba isuselwa ochungechungeni lwemibhalo ebhalwe nguRigoberto, umphathi wenkampani yomshuwalense obalekela iqiniso lansuku zonke, eveza imicabango nezifiso zakhe zocansi kwezinye izincwadi zokubhalela.
Yonke imibhalo isuselwe emisebenzini yobuciko, eyokufanekisa neyomculo neyokubhala esebenza njengokukhuthaza. Phakathi kwazo kukhona: Umsuka womhlaba y Ubuvila nenkanukonguGustave Courbet; Nude ngekatinguBalthus; UDiana nabangane bakhenguJohannes Vermeer; La Priere y Umhlane kaKiki de Montparnasse nguMan Ray, ukuphrinta okungokomzwelo kwe-Utamaro noma Ubhavu waseturkeynguJean Auguste Dominique Ingres.
Ucabangani ngalezi zincwadi esizincomayo? Usuvele uzifundile? Senzele izincomo zakho zokufunda.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ukufundwa okunconyelwe leli hlobo
"Intombazane Esitimeleni", ebhalwe uPaula Hawkings, lesi senzo semibhalo sasehlobo